सर्बोच्च अदालतको आदेश लत्याउंदै ने.क.पा. कास्कीका इन्चार्ज रुपेश अदालत गेटबाट फेरी गिरफ्तार, म्याग्दी लगिंदै – JanaSanchar.com
सर्बोच्च अदालतको आदेश लत्याउंदै ने.क.पा. कास्कीका इन्चार्ज रुपेश अदालत गेटबाट फेरी गिरफ्तार, म्याग्दी लगिंदै
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ कार्तिक २६, मंगलवार) १९:४६
विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. कास्कीका ईञ्चार्ज कृष्ण वाग्ले “रूपेश”लाई अाज फेरी सर्बोच्च अदालतको गेटबाटै गिरफ्तार गरिएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा उनलाई आज सर्बोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएकोमा अदालतको गेटबाटै प्रहरीले फेरी गिरफ्तार गरेको हो।
गएकाे भदाै ६ गते उनी र पत्रकार अाेम हमाललाई पाेखरा महानगरपािलका वडा नं २९ खुदी लेखनाथबाट कास्की प्रहरीले गिरफ्तार गरेकाे थियाे । पत्रकार हमाल सर्वाेच्च अदालतकाे अादेशले काठमाडौंबाट छुटेका छन् भने नेता रूपेशलाई सर्वाेच्चले छाड्न अादेश दिएपनि प्रहरीले अदालतकाे अादेश लत्याउँदै गिरफ्तार गर्ने गरेकाे छ । उनले साेही क्रममा कास्की, तनहुँ, गाेर्खा, लमजुङ्ग, पर्बत र स्याङ्जा जिल्लाका प्रहरी हिरासतमा बन्दी जीवन बिताईसकेका छन् ।
यसैबीच नेपालको भूभाग कालापानी भारतको नक्शामा गाभिएको बिरोधमा आज बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. कास्कीले भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाएको छ ।
(२०७६ कार्तिक २६, मंगलवार) १९:४६ मा प्रकाशित